होली खेल्दा र खेलिसकेपछि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु — SaharaPati
रङहरुको पर्वका रुपमा हरेको होली आज देशका पहाडी जिल्लाहरुमा धुमधामका साथ मनाइँदै छ भने तराईका जिल्लाहरुमा भोलि होली मनाइँदै छ।
होली पर्व एक अर्कामा रङ दलेर मिठामिठा परिकार खाएर हर्षोउल्लासका साथ त्रेता युगमा दैत्यराज हिरण्यकश्यपुले विष्णुभक्त आफ्ना पुत्र प्रल्हादलाई मार्ने उद्देश्यले ब्रह्माबाट आगोले छुन नसक्ने वरदान पाएकी आफ्नी बहिनी होलिकालाई प्रल्हादका साथ दन्किरहेको आगोमा पस्न लगाउँदा होलिका आफैँ भष्म भएकी तर भक्त प्रल्हादलाई आगोले छुन नसकेको कथा यो पर्वसँग जोडिएको छ।
त्यसै बेलादेखि शक्तिको दुरूपयोग गर्ने पापी प्रवृत्तिकी प्रतीक बनेकी होलिका मारिएको उपलक्ष्यमा होली (फागु) खेल्ने परम्परा चलेको मानिन्छ। यसैगरी द्वापरयुगमा श्रीकृष्ण भगवान्लाई मार्न कंशद्वारा पठाइएकी राक्षसनी पुतनाले आफ्नो विष दलिएको स्तन चुसाउन लाग्दा असफल भई मारिइन्।
निजलाई व्रजवासीले जलाई फागु महोत्सव मनाउने परम्परा चलेको पनि धर्मग्रन्थमा उल्लेख गरिएको धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राडा रामचन्द्र गौतमले बताए।
त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग अनुसार द्वापर युगमा श्रीकृष्णलाई मार्नको लागि श्रीकृष्णकै मामा कंशले आफ्ना धेरै राक्षस लाई पठाएको थियो। राक्षसी मध्येकी एक पुतनाले श्रीकृष्णलाई मार्नको लागि आफ्नो स्तनपान गराउँदा उल्टै श्रीकृष्णले स्तनमा टोकी पुतनालाई मारिदिए। पुतनाको शवलाई ब्रिजबासीहरुले त्यसै दिन जलाएर एक आपसमा रङ र अबिर छरी खुसियाली मनाएकोले त्यसैको सम्झनामा अद्यावधिक चीरदहन गरी हाली खेल्ने परम्परा रहिआएको भनाइ छ।
होलीमा रङको विशेष प्रयोग हुन्छ। परिवार र इष्टमित्र मिलेर रमाइलो गरिने होलीमा विभिन्न खालका विकृति र विसङगति भित्रिएको छ। होलीमा फोहोर पानी र हिलो छ्याप्ने, अण्डा र गोलभेँडा फोड्ने, लोला हान्ने लगायतका खराब कार्य पनि हुने गरेका छन्।
रङबाट बच्ने उपाय
टिचिङ् अस्पतालका विभागीय प्रमुख तथा वरिष्ठ छाला रोग विशेषज्ञ डा. दिवाकर श्रेष्ठका अनुसार रङले अनुहारको छालामा प्रत्यक्ष असर गर्छ। अझ सुख्खा छालाले रङ छिटो सोस्ने गर्छ। अचेल धेरै प्रयोगमा आउने रङ्गीचङ्गी निलो, गुलाबी, कालो, वैजनी, हरियो रङहरू बनाउन प्रयोग हुने रसायनहरूले विशेष गरि छालामा असर गरि एलर्जी, चिलाउने, इरिटेसन हुने, सुन्निने, फोका आउने, रातो डाबर आउने हुनसक्छ।’
रङ बनाउन प्र्रयोग हुने रसायनले क्यान्सरसम्म गराउन सक्ने र रङले गर्दा आँखा रातो हुने, चिलाउने, सुन्निने, कमजोर हुने र दीर्घकालीन रूपमा अन्धो हुने सम्भावना पनि हुन्छ। रमाइलोका नाममा गुणस्तरहीन रङको प्रयोगले छालामा र आँखामा समस्या देखिने भएकोले ध्यान पुर्याई होली खेल्न डा. श्रेष्ठले सल्लाह दिएका छन्।
होली खेल्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
-होली खेल्दा उज्यालो रङको र पूरा बाउला भएको लुगा लगाउनुपर्छ।
-आँखामा चश्माको प्रयोग गर्नुपर्छ।
-होली खेल्नु अघि अनुहार र बाहिर देखिएका शरीरका अरू भागमा सन ब्लक क्रिम, मोइस्चराइजर वा नरिवलको तेलको प्रयोग गर्नुपर्छ।
– सफा पानीको प्रयोग गर्नुपर्छ।
– रसायन र लिड नमिसिएको गुणस्तरीय रङको प्रयोग गर्नुपर्छ। सकेसम्म रङको प्रयोग कम गर्नुपर्छ।
-अरूलाई रङ लगाइदिँदा आँखामा नपर्ने गरि लगाइदिन् पर्छ।
-रङले कपालमा पनि असर गर्ने भएकोले विशेषगरि केटीहरुले कपाल एकै ठाँउमा पोको पारेर जुरो बनाउँदा ठिक हुन्छ।
होली खेलिसकेपछि ध्यान दिनुपर्ने कुरा
-स्याम्पु र साबुनको प्रयोग गरि राम्रोसँग नुहाउनु पर्छ।
-नुहाउदा आँखा र मुखभित्र रङ पखालेको पानी नपर्ने गरि ध्यान पुर्याएर नुहाउनु पछ्र्र।
-धेरै रङ लागेको ठाउँमा साबुन लगाएर हल्कासँग मिचेर पखाल्नु पर्छ। मज्जाले मिच्दा रातो डाबर आउन सक्छ।
– नुहाइसकेपछि अनुहार र सम्पूर्ण शरिरमा मोइस्चराइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ।
-यी सबै गर्दा पनि शरीरमा समस्या देखिएमा, एलर्जी भएमा, डाबर आएमा तुरुन्तै चिकित्सकको सल्लाह लिनपर्छ।
सांस्कृतिक महत्वको चाड होली मनाउनु, एकआपसमा रमाइलो गर्नु एकदम राम्रो हो। तर रमाइलोको नाममा अरुलाई दुःख दिनु, अरुलाई हानिकारक रङ दल्नु, मोबिल र केमिकलहरू दल्नु जस्ता कार्यहरूले दीर्घकालिन रोग निम्त्याउन सक्ने हुन्छ। त्यसैले बेलैमा सचेत भइ होली मनाउन डा. श्रेष्ठ सुझाब दिन्छन्।
कतै तपाई उभिएर पानी पिउनु हुन्छ ? त्यो हो भने आजै छाड्नुहोस नत्र…
चट्याङ के हो र कसरी बच्ने?